Home Wararka Duqeymo Cirka ah oo ka soconaya magaalada………..
Duqeymo Cirka ah oo ka soconaya magaalada………..
Wararka laga helayo Yemen ayaa sheegaya in Ciidamada uu taageero isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ay Weerar dhinaca Cirka ah ku qaadeen Magaalo xeebeedka Al Xudeyda oo ay maamulaan Kooxda Xuutiyiinta.
Dagaalkaan waxa uu ka dhigan yahay kii ugu weynaa muddo 3 sano ah oo dhexmara Isbaheysiga iyo Xuutiyiinta taageerada ka heysta Iiraan.
Waxaa lagu tiriyaa Dekada Magaalada isha ugu muhiimsan oo ay kusoo xirtaan Shixnadaha iyo gargaarka ka yimaada dalalka Carabta iyo Yurub, sidoo kale waa xarunta Ganacsiga ee Yemen.
Hay’adaha gargaarka ayaa ka digay in dagaalka ay ku barakacaan ku dhowaad rubac Milyan u dhashay Yemen oo ku nool Xudeyda.
Dagaalka Yemen ayaa gaaray meel xun, markii uu kusoo biiray Sacuudiga iyo Isbaheysiga uu hogaaminayo 2015 si ay u hakiyaan Kooxda Xuutiyiinta oo la wareegay Caasimada Sanca.
Sacuudiga ayaa taageeraya Xukuumadda Cabdi Rabah Mansuur Haadi, waxaana ay ku eedeysay Riyaad Xuutiyiinta in ay u adeegsato Dekada Magaalada Al Xudeyda Hubka kaga yimaada Iiraan, taasi oo ay iska fogeysay Kooxda.
Boqolaal Kun oo Yemen ah ayaa ka baxsaday Xudeyda oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Waddanka xagga tirada Dadka degan.
10 Kun oo Qof ayaa la rumeysan yahay in ay ku dhinteen dagaalka Yemen tan iyo markii uu kusoo biiray dagaalka Isbaheysiga Sacuudiga bishii March 2015.
Previous articleKheeyre oo shacabka muqdisho Madadaalinaayo!!!
Next articleSAWIRRO: Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Farmaajo iyo Culimada ugu Caansan dalka oo kulmay?
Guddoomiye Cumar Filish” Xilalka Dowladda waxaa loo salaxay Ciyaalka Xaafadda”
Wafdi ka Socda Imaaraat-ka oo Si aan Wanaagsaneeyn loogu Caja-juubay Garoonka...